Ogige ntụrụndụ dị m nso Ogige ntụrụndụ 35 kacha mma maka ụmụaka na UK
Ogige ntụrụndụ dị m nso | Ogige ntụrụndụ 35 kacha mma maka ụmụaka na UK
By Na -agba egwu September 16, 2021 Travel 0 Comments
Ogige ntụrụndụ dị m nso -
Ka ezumike ụlọ akwụkwọ na -abịa, ezinụlọ ga -achọ ebe izu ike. Yabụ na anyị achịkọtara ndepụta ogige ntụrụndụ kachasị amasị anyị maka ụmụaka na ndị na -eto eto n'obi.
Agbanyeghị, ogige ntụrụndụ ụfọdụ na -apụta n'ezie maka ebe na -enye ọmarịcha ihe nkiri nke ezubere maka ụmụaka na -enweghị obi ike na obere ume.
Ogige ntụrụndụ ga -abụ ebe zuru oke ị ga -aga iji mee ka ụmụ gị fụọ ụfọdụ uzuoku wuru. Ndị na -anya ụgbọ ala n'ụsọ oké osimiri na slides na -agbagọ na -enye nnukwu ụmụaka obi ụtọ.
Anyị bụ nnukwu ụmụaka n'obi, yabụ anyị na -enwe mmasị ịga n'ogige ntụrụndụ, mana soro nwa ewu. N'ihi ọnụ ahịa tiketi, gaa n'ogige ntụrụndụ nwere ụlọ akwụkwọ ọta akara mgbe ụfọdụ anaghị enwe isi.
Ogige ntụrụndụ isiokwu dị mma maka ụbọchị ezumike ezinụlọ na-atọ ụtọ, mana ha anaghị adịcha mma mgbe niile ma ọ bụrụ na ị nwere obere ụmụaka na-etozughị maka njem ahụ.
Mgbe ahụ enwere rolacoasters na -atọ ụtọ, nke nwere ike ịmasị ndị na -eto eto na ụmụaka toro eto mana ọ na -atụ ụjọ nke ukwuu maka obere ụmụaka - ọ bụrụgodi na ha nwere obi ike, ha nwere ike ọ gaghị enwe ike ịnya ụgbọ elu ma ọ bụrụ na ha adịghị ogologo.
Ozi ọma ahụ bụ na ogige ntụrụndụ achọpụtala ma na-eme mgbanwe iji lekọta ụmụaka na-eto eto na obere ụmụaka, yana itinye ihe ndị ọzọ iji mee ka ogige ndị ahụ dịkwuo mma maka ụmụaka.
Anyị na-ekwu maka oghere a họpụtara, obere ebe ụmụaka ga-enwe mmasị na ya, na ebe egwuregwu dị nro ebe ha nwere ike ịgafe oge.
Enwere ọtụtụ ogige isiokwu UK dị mma maka ndị na -eto eto na ụmụaka, na -eme ka ha dị mma maka ọpụpụ ezinụlọ gị ọzọ.
Ogige ntụrụndụ 35 kacha mma dị m nso na UK ịga soro ụmụaka
N'okpuru bụ ụfọdụ ogige ntụrụndụ dị m nso:
1. Ogige Paultons, Hampshire
Nke a bụ otu n'ime ogige ntụrụndụ dị m nso.
Peppa Pig World bụ okwu atọ dị ebube nye ndị nne na nna.
Ọzọkwa, Peppa Pig's Big Balloon Ride, Miss Rabbit's Helicopter Flight, na George's Dinosaur Adventure Ride so na njem asaa a na -eme na Paultons Park raara nye mascot ụmụaka ama ama.
Agaghị ekwu maka mgbakwunye nke njem abụọ ọzọ n'afọ gara aga, nke anyị nyochara ebe a.
Enwekwara ọtụtụ ohere izute na ikele ndị obere ka ha na ndị ọkacha mmasị ha na-emekọrịta ihe, yana ụlọ ahịa ihe egwuregwu dị na saịtị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgwọ ha ihe ncheta ụbọchị.
Nbanye ogige isiokwu gụnyere Peppa Pig World, otu onye na -akwadokwa ogige ndị ọzọ maka obere ụmụaka.
2. Ụlọ elu Alton - Alton, England
The Tonlọ Alton bụ ụlọ nke ụfọdụ ihe nkiri kacha egbu egbu n'ụwa, gụnyere 14 loop rollercoaster mbụ nke ụwa na ọdịda mmiri mbụ na-agbada, ọ ga-atụkwa ụjọ ọbụna ndị na-achọ mkpali siri ike.
Ọ na -enyekwa ụmụaka nwere egwu na ịgba egwu CBeebies Land, nke nwere ịnyịnya 14, ihe ngosi dị iche iche na -ebi ndụ, yana ụlọ oriri na ọ associatedụ associatedụ ndị ọzọ.
a ama mkpori ndụ, nke a ma ama n'etiti ndị njem nleta na Blackpool nke dị n'ụsọ osimiri, nwere ihe nkiri dị ka Nickelodeon Land yana nnukwu rollercoasters dị ka The Big One na ICON, nke mbụ UK na-ebido rollercoaster nke na-eme ka ndị na-agba ya rute elu 88.5ft.
4. Ogige Egwuregwu Flambards, Cornwall
The Ndị na -agba ọkụ dị na Helston, Cornwall, ogige ntụrụndụ ụmụaka nwere mmasị na ya. Ọzọkwa, njem ọdịnala nke Ferdi's Funland, dị ka nkuzi, ụgbọ elu ụgbọ elu, na Pirates, ga -ahụ n'anya site na ezinụlọ nwere obere ụmụaka.
Ndị na-akwado Dinosaur nwekwara ike inyocha Jurassic Journey dinosaurs, kpughee ihe omimi n'ime Dino Dig, ma ọ bụ hụ ndị Dino-Nursey bịara ọhụrụ. Western Train: ihe ọhụrụ maka 2021 - wụba n'ụgbọ!
5. Nnukwu atụrụ - Devon
Nnukwu Atụrụ bụ ọmarịcha ụbọchị na Devon maka ụmụaka n'agbanyeghị ihu igwe! Maka ụmụaka ndị toro eto, enwere igwe na -anya ụgbọ ala gbakwunyere ihe ngosi 12 na ọmarịcha egwuregwu egwuregwu dị n'èzí, nke na -egosipụta nnukwu mbuli elu, ịnyagharị gbagọrọ agbagọ, na ebe ndị na -amị amị.
Ndị na-eto eto ga-asọpụrụ Piggy Pull-Along, Safari Tractor, traktọ maka onwe ha, pikọp na pedalos!
The Legoland bụ ụbọchị ezumike ezinụlọ maka ụmụaka nọ n'okpuru afọ 12 nwere ọtụtụ ihe omume maka ezinụlọ dum.
Mee ka à ga-asị na ị bụ nnukwu mgbe ị na-agagharị n'ala Mini, na-atụgharị akụkọ ndị kachasị amasị gị na Fairy Tale Brook, ma ọ bụ mee ya nke ọma na rollecoasters na ihe nkiri.
Maka ihe pụrụ iche, debe otu abalị na Legoland Resort Hotel ma ọ bụ Castle Hotel, nke na -enye ọtụtụ ihe eji enyere ndụ aka dị ka ntụrụndụ ndụ, ebe obibi isiokwu, yana uru dị ka nnabata ogige mbụ.
Enwere ebe nlekọta ụmụaka dị iche maka nne na nna nwere ụmụ amụrụ ọhụrụ ebe ha nwere ike inye ara, nri karama, ma ọ bụ gbanwee akwa nhicha.
Omume ntụrụndụ na Houston maka ndị okenye
The Ogwugwu bụ ahụmịhe ogige ntụrụndụ kacha dị elu nke ụmụaka na ndị okenye na -enweta ohere ịnya, rụọ ọrụ, na ịkwọ ụgbọ ala REAL, igwe nsị na igwe ndị ọzọ. Maka nnukwu ụbọchị na-emegharị ụwa, gaa na Diggerland ma ọ bụrụ na igwu ya!
8. Ogige Mmiri Sandcastle
The Ogige Mmiri Sandcastle bụ ezigbo playgium ime ụlọ maka ụmụaka hụrụ mmiri n'anya, akụkụ dị mkpa nke mmemme ezinụlọ Blackpool.
Ọzọkwa, Sandcastle na-enye onye ọ bụla nọ n'ezinụlọ ọmarịcha, obi ụtọ, juputara na ọdọ mmiri ebili mmiri na slides, egwuregwu mmiri na-emekọrịta ihe, yana maka ndị ọbịa meworo okenye, ndị na-eme mkpọtụ na-acha ọcha.
9. Ogige ntụrụndụ dị m nso: Lemur ọdịda
Ọdịda Lemur dị n'etiti ogige ntụrụndụ dị n'ebe ugwu nke Poole na Bournemouth ma na -enye ụmụaka ụbọchị dị egwu nke egwuregwu nro dị n'ime ụlọ.
Enwere ụzọ eriri pụrụ iche dị ala maka ụmụaka yana mgbidi LED nke na-enye ohere ka ndị na-arị ugwu na-atụghị egwu gee akụkọ ma dozie ihe mgbagwoju anya, ọtụtụ ihe mmịfe, ọwara mmiri na oghere bọọlụ, na mpaghara agba agba agba nkịtị.
10. Ugbo nzuzu - Pembrokeshire, Wales
The Ugbo nzuzu bụ ogige ntụrụndụ na zoo na mpaghara Pembrokeshire - ọ bụkwa ọmarịcha ụbọchị maka ụmụaka nwere pasent 50 nke nlegharị anya na ihe omume mepere ọbụlagodi mgbe mmiri na -ezo!
Ọtụtụ ebe nkiri gụnyere Vintage Funfair, ugbo, zoo, ma ọ bụ ọmarịcha akụrụngwa ime ụlọ na nke ụmụaka maka Farm Farm.
11. Ogige ntụrụndụ Gulliver
Ogige ntụrụndụ nke Gulliver emebere maka ezinụlọ, nke pụtara na ha na -ahazi njem na mmasị ọ bụla maka obere ụmụaka.
N'ikwu eziokwu, ọ nweghị ụmụaka esoro ya ka a ga -anabata n'ime ogige ahụ maka otu ndị okenye ma ọ bụ ndị okenye naanị ha nọ. Gulliver World Warrington, Alaeze Gulliver Bath Matlock ma ọ bụ Milton Keynes Gulliver Country
Enwere rollercoasters, ịnya mmiri, ebe fesa, ndekọ - ihe ọ bụla ụmụaka nwere ike ịnụ ụtọ na ogige isiokwu ndị ọzọ, ọ bụ ndị na -eto eto nwere ihe ụtọ niile n'oge a.
Ịdị obere maka ịnya ụgbọ ala taa? Oghere dị n'ime ụlọ na n'èzí dị ọtụtụ ma enwere ike ịnụ ụtọ ya.
12. Ogige ntụrụndụ Milky Way Adventure
Ogige ntụrụndụ Milky Way bụ ọkacha mmasị nke ezinụlọ na -eto eto na nso Clovelly, North Devon.
Ọzọkwa, ogige ahụ na -enyekwa ihe ngosi ndụ, ebe egwuregwu dị nro maka ndị na -erubeghị afọ ise, yana Milky Way Railway, yana njegharị na ebe nlegharị anya dịka Cosmic Typhoon, mpaghara clone, na Time Warp.
The Adventureland nke ọdịda anyanwụ bụ ogige ntụrụndụ e mere maka ụmụaka na -erubeghị afọ iri, yana ngwakọta ihe omume ime ụlọ, ịnyagharị ogige isiokwu, na ebe a na -egwu egwu n'èzí.
Hapụ ụmụ gị ka ha na -agbagharị n'ọhịa n'elu nnukwu ájá dị n'èzí, gaa na ụlọ ahịa anụ ụlọ mbụ na -abụ abụ, ma ọ bụ gbagoo n'igwe n'azụ ụfọdụ Giddy Piggies.
14. Thomas Land na Drayton Manor
The Thomas Land na Drayton Manor nwere ihe karịrị ụgbọ ịnyịnya na ihe omume 25 maka ndị na -akwado agwaetiti Sodor ịnụ ụtọ ya. Gaa Bertie Bus, were njem ụgbọ elu Helicopter Harold, ma ọ bụ nwee ahụmịhe Cranky's, Tower Drop.
Ụmụaka na -achọ ihe na -atọ ụtọ ga -enwe mmasị ịnya gwongworo na -enye nsogbu na rolaịaster mbụ ha. N'ụlọ akwụkwọ ịnya ụgbọ ala Terence, ha nwekwara ike gaa Rocking Bullstrode ma ọ bụ mụta ịrụ traktọ.
15. Ogige ntụrụndụ Crealy & ebe ezumike
Enweghị ụkọ ihe omume maka ezinụlọ niile nọ na ya Ogige ntụrụndụ Crealy & ebe ezumike zuru ezu na njem na -atọ ụtọ, ọtụtụ mpaghara egwuregwu ime ụlọ, ihe nkiri ndụ, na Alaeze Buddy Bear.
Site na akụkọ mgbe ochie Big One ruo akara ngosi ga-emepe n'oge na-adịghị anya, Ụgbọ mmiri Blackpool Pleasure nwere ụfọdụ rollercoasters na -atọ ụtọ n'ezie.
Maka ụmụaka na ụmụaka, Nickelodeon Land bụ ebe aga. Zute Chase na Marshall sitere na PAW Patrol, Spongebob Square Pants na Patrick, ma ọ bụ Dora Explorer ka ha na -enyocha mba ọhụrụ.
A ga -enye ụmụaka na -erubeghị afọ abụọ Pleasure Beach Pass n'efu iji banye ogige ahụ, nke gụnyere ebe nkiri dịka Chinese Puzzle Maze, Pleasure Beach Express, na Ogige Mmụta Bradley & Bella.
Sundown Adventureland dị na Retford bụ nnukwu ebe maka ụbọchị ezumike ezinụlọ. Ọzọkwa, Angry Birds Activity Park, Rocky Mountain Railroad, na ọtụtụ njem ndị ọzọ ezubere maka ụmụaka na -erubeghị afọ 10.
At Chessington World of Adventures, enwere ụmụaka iri na asatọ na -agba ịnyịnya, gụnyere Gruffalo River Ride Adventure, ebe ị nwere ike soro Mouse na njem na -atọ ụtọ nke ụgbọ mmiri site na osisi gbara ọchịchịrị.
Enwekwara ihe omume ndụ, yana Chessington Zoo a ma ama na Sea Life Center.
19. Gwuo Factore, Manchester
The Gwuo Factore bụ mpaghara egwuregwu ime ụlọ kacha ukwuu na UK ma nọrọ na Beyond Center dị ịtụnanya (naanị n'okporo ụzọ si na Trafford Center).
Play Factore nwere ihe niile n'okpuru otu ụlọ, gụnyere zipline, pọọlụ bọọlụ ime ụlọ, mpaghara egwuregwu dị larịị dị iche iche, yana mpaghara ụmụaka na-amụ ihe pụrụ iche.
Ọsọ megide ezinụlọ gị n'ọsọ a dị mkpirikpi ma na-akpali akpali na egwu go-kart ime ụlọ. N'otu kart, ụmụaka na ndị okenye nwere ike ịgba ọsọ ọnụ!
20. Ogige mmiri Calypso Cove
Ogige mmiri ime ụlọ a nwere ihe nwere paireti ọ ga -abụ na ọ ga -arata ọbụna onye nwe ụlọ na -esi ọnwụ ike ịlaghachi maka ihe ndị ọzọ.
Calypso Cove dị mma maka ụdị ndị na-egwu mmiri niile, yana ngwakọta ọdọ mmiri na ihe mmịfe (gụnyere mpaghara ụmụaka na-eme enyi na-eme enyi), na ụlọ oriri na ọ poolụ poolụ n'akụkụ ọdọ mmiri na-enyere aka na-echebe ma na-echekwa onye ọ bụla na-achọghị mmiri.
Igwe na-efegharị efegharị na mpaghara Calypso Cove bụ ihe a ga-ahụrịrị maka ezinụlọ niile.
The Ogige njem nlegharị anya nke ala, nke dị na etiti Cairngorms National Park, na-adọta ezinaụlọ na-achọ ụbọchị mmemme.
Ọzọkwa, enwere ọtụtụ ihe maka ma ụmụaka ma ndị okenye ga -enwe, site na Ọdọ Mmiri Mmiri ruo na ahụmịhe Skydive na Tarzan Trail.
22. Ala Flamingo, Malton
The Ala Flamingo nwere ike ọ gaghị apụta na ndepụta ogige ntụrụndụ kachasị elu na UK, mana ekwela ka aha ya duhie gị - ogige nwere ọtụtụ ihe inye karịa nnụnụ.
E nwere ọdụm, agụ, na adaka n'etiti ọtụtụ anụ ọhịa ebe a, mana ọnụọgụ ịnya ụgbọ ala dị ịtụnanya. Site n'ilekwasị anya n'ịgba ịnyịnya ezinụlọ, enwekwara ahụmịhe dị oke egwu maka ndị kacha nwee obi ike, dịka Velocity, nke na -enye gị ohere ịgba ọsọ nnukwu egwuregwu.
Ọ bụrụ na ị na -achọ ihe ntakịrị ịbelata, enwere Peter Rabbit Adventure, ebe ị nwere ike gafere Peter na Lily!
Ngwa ejirila dị m nso
Ego mgbazinye PPP na enweghị ọrụ
Ihe ị ga -eme na Big Bear
23. Ogige ntụrụndụ dị m nso: M&D's
M&D, Ogige ntụrụndụ kachasị amasị Scotland, ga -efu na ọkwa ọ bụla nke ogige ntụrụndụ kachasị na UK.
Ihe na -adọrọ mmasị a, nke dị na ọmarịcha Strathclyde Country Park, dị ebube n'agbanyeghị ihu igwe ọ bụla - ọ bụrụ na ọ dịghị mma na mpụga, jiri nnukwu egwuregwu dị nro na Scotland nke mbụ n'ime ime mmiri mmiri.
24. Ọdụ ụgbọ elu Brighton
Jikọta njem n'ụsọ osimiri na nkwụsị na Ọdụ ụgbọ elu Brighton, nke na-enye ọtụtụ ihe omume enyi na enyi dị ka egwuregwu egwuregwu arcade na ịnya ụgbọ ala mara mma.
Brighton bụ ebe dị egwu ịga leta afọ niile, yabụ gịnị kpatara na ị nwalee ụfọdụ mmemme ndị ọzọ?
Mmiri mmiri nke Stoke bụ ọmarịcha ogige ebe okpomọkụ na Midlands! Ọ bụ ụzọ zuru oke iji kwe nkwa na ụbọchị ezumike ezinụlọ gị na -eme mkpọtụ, yana ịnya ụgbọ ala 30 na egwuregwu, mpaghara ime na mpụga, yana 1 nde galọn mmiri (kpọrọ ihe!).
Site na Space Bowl na-agbagharị agbagharị ruo Black Hole, nke na-ebuga gị n'ọchịchịrị, ndị otu ezinụlọ na-atụghị egwu nwere ike ịnụ ụtọ ọmarịcha mkpịsị aka n'ọtụtụ ihe mmịfe.
Agaghị ekwu maka Nucleus, Waterworld nke mbụ Mmiri Rollercoaster nwere ụkwụ 375 nke nsogbu - ị nwere obi ike zuru oke?
Mee beeline maka ọdọ mmiri ọdọ mmiri dị n'ime ma ọ bụ n'èzí, ma ọ bụ ọdọ mmiri umengwụ, nke dị kwa oge, ma ọ bụrụ na ị na -achọ ebe zuru oke iji zuru ike ma zuo ike.
Ọ bụ ọmarịcha ezinụlọ na -atọ ụtọ ihe ọ bụla ihu igwe, gụnyere rapids, ọdọ mmiri ebili mmiri, na usoro mwakpo mmiri!
Ọ nweghị ebe ka mma ị ga -ekpughere ụmụaka gị maka njem mmiri na -atọ ụtọ karịa ebe a! Ndị na -amaja gị na -enwe nkụda mmụọ ka ahapụ gị.
26. Oké Osimiri Coral, Bracknell
The Mmiri Mmiri Coral Reef Bracknell alaghachitela ma dị mma karịa mgbe ọ bụla mgbe emezigharịrị nnukwu ihe, na -anya isi na ọ bụghị otu, ọ bụghị abụọ, mana mmịgharị mmiri ise na -amị amị. Ị chere na otu nkịta oke osimiri nwere nnu nwere ihe ọ ga -ewe iji were na Canon?
Jikere ka ịwụda ọdịda nke mita 67 na oke ọsọ ọsọ! Ezinaụlọ nwere ụmụaka na -erubeghị afọ ise nwere ike ịfefe gafee ụgbọ mmiri ndị ọkwọ ụgbọ mmiri, ọbọgwụ n'okpuru egbe mmiri, wee zuru ike n'akụkụ ọdọ mmiri ụmụaka obere Corals.
Ejiri ha ohere dị ukwuu maka ụmụaka gị gwuo egwu. Ịnyịnya na nwere ike ahaziri. Site na ngosipụta ụda dị iche iche na mmetụta ọkụ, Storm Chaser na -emegharị ọ ofụ nke oke osimiri ma hapụ onye ọ bụla nọ n'ụgbọ mmiri ịhọrọ njem nke ha.
27. Ogige Mmiri Sandcastle, Lancashire
Ebee ka ị ga -achọpụta dragọn, ihe osise Aztec, na oke osimiri? Enwekwara otu ogige ntụrụndụ ime ụlọ kacha ibu na Britain, nwere ihe karịrị njem 18 na ebe nkiri.
Aha ya Sandaki na -egosi Water Park. Mebie ụlọ nsọ nke Aztec Falls iji mee ka ị banye n'ọchịchịrị na/ma ọ bụ gbaga na ala nke ihe mmịfe dragọn abụọ, ebe ọdịda dị egwu ga -ebupute ihe okike nke onye mmeri!
Enwere ike ịnweta ogige ahụ niile site na oche nkwagharị na ị nwere ike kpọrọ ndị na -egwu mmiri gaa ebe dị omimi na -enwu gbaa nke mbụ.
28. LC Swansea, Glamorgan, na Cardiff
Kpọgidere iri na The LC Swansea, ebe ihe mmịfe, ikuku mmiri na mpaghara egwuregwu dị okpukpu anọ bụ naanị simulator surfing ha karịrị.
Mgbe ha yichara okpu agha nchekwa, ụmụaka nwere ike dokwasị ịnyịnya ha kwesịrị ntụkwasị obi, nke a na -akpọ surfboard, ma nwaa ịnya ikuku na -efe efe nke ebili mmiri.
Dabere na ọkwa nka ha, ha nwere ike ịnya n'elu tummies ha ma ọ bụ guzoro ọtọ wee na-achọgharị mmiri dị ka oke osimiri; ọ siri ike karịa ka ọ dị mana ọ na -atọ ụtọ nke ukwuu.
Mgbe ahụ enwere mmịfe osimiri na -adị umengwụ, igwe na -efegharị efegharị, na oke mmiri jupụtara na àkwà mmiri na olulu bọl maka ụmụaka.
Ihe ngosi sọfụfụ ahụ ga -abụrịrị nke kacha mma maka ya. Mgbe m nyochachara ọtụtụ ogige mmiri ime ụlọ na UK - nke enwere ọtụtụ n'ime ha.
Dunes Splash World n'ụsọ osimiri Merseyside na -ebuga gị na mpaghara ebe okpomọkụ. Enwere mpi anọ nwere ọkwa ihe egwu dị iche iche, dị ka Speed ​​Freak Flume Ride.
Ọ bụ ọnụọgụ ngwa ngwa n'ezie, dịka aha ya pụtara, na -ebugharị onye na -agba ya n'akụkụ nkuku ka ọ na -agbalị imebi ndekọ ahụ. Njem ọchị ezinụlọ na-atọ ụtọ dị nro, nwere ihe ngosi ọkụ na ọkpọkọ agbazere iji gafee.
Nwa obere akpa nwere ike were nkuzi igwu mmiri ma ọ bụ bọket n'ọnụ ọdọ mmiri na -amụ ije - naanị cheta Murtle Turtle ise, nke a na -ahụkarị ka ọ na -emikpu.
Ọ dị mma maka nnọkọ 'Quiet Night' ha. Ndị otu Aiming High kere ha maka ụmụaka na ndị na -eto eto nwere nkwarụ.
30. Ogige mmiri ọdọ mmiri Blue Lagoon, Pembrokeshire
Njem na Ogige Mmiri Blue Lagoon na Wales ga -ebuga gị n'ime ime obodo Welsh. Tinyere uzuoku, ọnọdụ a na -enye ọtụtụ ihe dị adị n'ezie, dị ka ọdọ mmiri a ma ama nke nwere usoro ebili mmiri isii dị iche iche na mmiri ọkụ na -esi n'okpuru mmiri.
Ha ekepụtala osimiri ime ụlọ nke na -adịghị ka ihe ọ bụla ị ga -ahụ na UK, na -enweghị unyi n'akụkụ ọ bụla na n'akụkụ ọ bụla.
N'ihi! Jiri njem dị elu megharịa oke osimiri asaa ahụ, nke na-akwụsị na mpụga ihe owuwu ahụ obere oge tupu ị banye ọzọ wee tụba gị n'ime ọdọ mmiri!
Nke kacha mma maka àgwà gburugburu ebe obibi ya. Mmiri biomass na -eme ka mmiri kpoo ọkụ, a na -ekwukwa na ọ bụ naanị ogige mmiri UK.
31. Ogige Ntụrụndụ Leyton, Greater London
The Ogige Ntụrụndụ Leyton. Ọ bụrụ na ọ dị gị ka oge eruola ka ị na -emeso ezinụlọ gị ihe ụbọchị agaghị echefu echefu, ọ nweghị ihe na -atọ ụtọ karịa ịgagharị otu n'ime ogige ntụrụndụ kacha ibu na Britain!
Otu ụbọchị na ogige isiokwu bụ ihe na -atọ ụtọ nye mmadụ niile, site na mkpali dị ukwuu ruo obere obere mmiri.
Ọzọkwa, nhọrọ anyị maka ogige ntụrụndụ isiokwu kachasị mma nke Britain na -enye ihe karịrị naanị oke mmiri - ihe ọchị mmiri, anụmanụ ndị na -apụ apụ na ụgbọ okporo ígwè bụ naanị mmalite.
32. Ala ndị Dinosaurs dị ndụ, Worcestershire
West Midland Safari Park ga -ebughachi gị azụ n'oge Ala ndị Dinosaurs dị ndụ. Ị ga -ezute ọtụtụ dinosaurs animatronic ma echefula ohere igwu maka ọkpụkpụ nke gị na Dino Dig.
33. National ShowCaves Center maka Wales
National ShowCaves Center maka Wales, nke nwere ụdị ihe ngosi dị egwu karịa 220, ga-anọrịrị na njem gị maka ụbọchị na-agwụ ike. Ị ga-enwe obi ike iji were T-Rex dị egwu?
34. Ndagwurugwu Ndagwurugwu Lagan Plex, Northern Ireland
Ma ị chọrọ mkpali elu octane ma ọ bụ na-ahọrọ ị were ya nwayọ, Ntụrụndụ Lagan Valley nwere ihe maka onye ọ bụla.
Site na mmịfe mmiri na-agba ọsọ adrenaline ruo osimiri umengwụ izu ike na ọmarịcha mmiri ịsa ahụ n'okpuru, ogige mmiri ime ụlọ a dị ịtụnanya nwere ya. Enwekwara ngalaba ụmụaka raara onwe ya nye nwere ọtụtụ ọrụ. Kedu ihe nchọta!
35. Ogige Thorpe, Chertsey, Surrey
The park na -akwụ onwe ya ụgwọ dị ka “isi obodo na -akpali akpali,” ọ bụghịkwa maka nkụda mmụọ. Ọzọkwa, '' Atọ n'Ime Otu dị nsọ '' nke ịnya ụgbọ ala gụnyere Stealth, otu n'ime ndị na-agba ọsọ ọsọ ọsọ na Europe na 0-80mph n'ime ihe na-erughị sekọnd abụọ; Colossus, onye mbụ na-agba okirikiri 10 na-agba gburugburu ụwa; na 4.5 G-force nke Nemesis Inferno.
Ị ka dị ndụ? Maka ndị iri na abụọ na karịa, enwere Saw -The Ride, mgbada kwụ ọtọ na -atụ egwu, yana Saw Alive, oke egwu dị egwu dabere na mkpagharị dị egwu.
Ụlọ ahịa Verizon dị m nso
Ihe ị ga -eme na Columbia, SC
Best Buy dị m nso
Ogige ntụrụndụ na ebe egwuregwu maka ụmụaka dị obere juputara na England, yana ihe niile site na olulu bọl na ọdọ mmiri ebili mmiri ruo na ájá ájá na ebe egwuregwu. Nke a bụ obere aka anyị chere na ọ ga -amasị ụmụaka gị! Ogige isiokwu kacha ibu na United Kingdom.
Enwere obi ụtọ dị ukwuu maka nnukwu ụmụaka, gụnyere mgbada kwụ ọtọ nke Oblivion na mkpali ikuku ikuku, yana ọkacha mmasị tupu afọ iri na ụma dịka Congo River Rapids. Ụmụaka, ka ọ dị ugbu a, nwere ala Cloud Cuckoo nke ha. Ebe nkiri ndị ọzọ gụnyere Sea Life Center na ọmarịcha ogige mmiri.
Hụrụ ndepụta anyị nke ogige ntụrụndụ kacha mma n'akụkụ m mana ụmụaka gị pere mpe maka ụfọdụ ịnya ụgbọ ala? Gaa na otu n'ime ogige ntụrụndụ kacha elu maka ụmụaka ebe a.
Biko hapụ okwu, dị ka akụkọ a na ogige ntụrụndụ dị m nso. Ọzọkwa, echefula ịgwa ndị enyi gị na ndị ezinụlọ gị banyere ya!
Tags:ogige ntụrụndụ kachasị mma maka afọ 5 uk, ogige ntụrụndụ kachasị mma maka afọ 7, ogige ntụrụndụ kachasị mma maka ụmụaka dị afọ 8 uk, ogige isiokwu gulliver, ogige ntụrụndụ n'èzí uk, ogige ntụrụndụ obere isiokwu, Ogige ntụrụndụ isiokwu maka ụmụaka gbara afọ abụọ uk, ogige ntụrụndụ ụmụaka dị nso m
Uru na ụkọ ihe ụfọdụ ibi n ’ime obodo ndị dị na Florida